ပင်မနေရာ မူဝါဒ/ဥပဒေ သုတေသန
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၇) Sunday, 12 May 2013 00:00	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ယာဉ်တင် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စက်အမြောက်ပုံ
Read more...	လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၆)	Sunday, 05 May 2013 00:00	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ယာဉ်တင် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စက်အမြောက်ပုံ
Read more...	လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၅)	Sunday, 28 April 2013 00:00	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	မြန်မာ့တပ်မတော် (ရေ) တွင် အသုံးပြုနေသော ၂၅ မမ လေယာဉ်ပစ် စက်အမြောက်အား စမ်းသပ်လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်နေစဉ်
Read more...	လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၄) Sunday, 21 April 2013 00:00	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	မြန်မာ့တပ်မတော် ဆက်သွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များ၏ သုတေသနနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးဌာနမှ တပ်မတော် အရာရှိများ
Read more...	လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၃)	Sunday, 07 April 2013 00:00	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	မြန်မာ့တပ်မတော် (ရေ) တွင် အသုံးပြုနေသည့် ၂၅ မမ လေယာဉ်ပစ် စက်အမြောက်
Read more...	လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၂)	Sunday, 31 March 2013 00:00	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Type – 80 (၅၇) မမ လေယာဉ်ပစ် စက်အမြောက်
Last Updated ( Thursday, 04 April 2013 15:40 )
Read more...	လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၁) Sunday, 24 March 2013 00:00	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	User Rating: / 1
PoorBest တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်၊ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့၏ LD – 2000 အမျိုးအစား လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စက်အမြောက် ဒုံးကျည်အား စမ်းသပ်ပစ်ခတ်နေစဉ်
Last Updated ( Saturday, 06 April 2013 13:27 )
Read more...	လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၀)	Sunday, 17 March 2013 00:00	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	အမေရိကန် လေတပ်မတော်မှ Stealth Lockheed F - 117 Nighthawk များ အုပ်စုဖွဲ့ပျံသန်းနေစဉ်
Read more...	လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၉)	Sunday, 10 March 2013 00:00	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	User Rating: / 1
PoorBest ?????????? ??????????????? ????????????? ??????????????? ???????????????
????????????????????????? ?????????? ???????????? ???????????????????????
Read more...	လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၈)	Sunday, 03 March 2013 00:00	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	User Rating: / 2
PoorBest ဆားဗီးယားနိုင်ငံရှိ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးပြပွဲသို့ မြန်မာတပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများ သွားရောက်လေ့လာစဉ်
Last Updated ( Saturday, 19 January 2013 21:11 )
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၇)
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၆)
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၅)
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၄)
တောင်အာဖရိကမှ လုံခြုံရေးနှင့် အသွင် ကူးပြောင်းမှု - အပိုင်း (၃) တောင်အာဖရိကမှ လုံခြုံရေးနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှု - အပိုင်း (၂) တောင်အာဖရိကမှ လုံခြုံရေးနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှု - အပိုင်း (၁) မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ သန္ဓေတည်လာခြင်း - အပိုင်း (၆)
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ သန္ဓေတည်လာခြင်း - အပိုင်း (၄)